CDM မှာ မပါဝင်သေးတဲ့ ဝန်ထမ်းများအတွက် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး ပေးလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး – Shwe Likes
Shwe G | March 4, 2021 | Local News | No Comments
တရားဝင် ဝန် ကြီး ပြောနေ ပါပြီ
၈.၃.၂၀၂၁ ကျော်လို့အလုပ်သွားနေလဲ တရားဝင် အလုပ်ပြုတ်ပီးသားပါ
CDM မှာ မပါဝင်သေးတဲ့ ဝန်ထမ်းများအတွက် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး
CDM တံခါး…! 7.3.2021 ည ၁၂ နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး CDM လုပ်မည့် ဝန်ထမ်းများ စာရင်းပေးပို့ပါ…! 8.3.2021 မြစ၍ 17.3.2021 အထိ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည်များအတွက် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ရုံးပိတ်ရက် ၁၀ ရက် ပိတ်ပါမည်…!
CDM မလုပ်သော ဝန်ထမ်းများ 8.3.2021 မှစ၍ ရုံးတက်ရန်မလိုတော့ပါ (ဝန်ထမ်းအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုတော့ပါ). ..!
နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်မပြုသောသူပုန်အဖွဲ့နဲ့ လက်တွဲပြီး နိုင်ငံကို ဖျက်ဆီးမလား…! ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ က လက်ခံပြီး နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုသော ပြည်သူ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လက်တွဲပြီး နိုင်ငံကို ကယ်တင်မလား…! ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားဖို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်ဝေစိုးရဲ့ Non-CDM ဝန်ထမ်းများအတွက် Final Call ပါ…!
တရားဝင္ ဝန္ ႀကီး ေျပာေန ပါၿပီ
၈.၃.၂၀၂၁ ေက်ာ္လို႔အလုပ္သြားေနလဲ တရားဝင္ အလုပ္ျပဳတ္ပီးသားပါ
CDM တံခါး…! 7.3.2021 ည ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး CDM လုပ္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စာရင္းေပးပို႔ပါ…! 8.3.2021 ျမစ၍ 17.3.2021 အထိ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ က်ဆဳံးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည္မ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ႐ုံးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ ပိတ္ပါမည္…!
CDM မလုပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 8.3.2021 မွစ၍ ႐ုံးတက္ရန္မလိုေတာ့ပါ (ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ပါ). ..!
နိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္မျပဳေသာသူပုန္အဖြဲ႕နဲ႕ လက္တြဲၿပီး နိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီးမလား…! ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ က လက္ခံၿပီး နိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ျပည္သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕လက္တြဲၿပီး နိုင္ငံကို ကယ္တင္မလား…! ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားဖို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေဝစိုးရဲ႕ Non-CDM ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Final Call ပါ…!